Modely hitantana ny fizahantany | Reef Resilience
Famantarana sy fitantanana ny fizahantany amin'ny fampiasana modely
Ny fahatakarana sy ny fanaraha-maso ny toe-piainana ara-tontolo iainana, ara-tsosialy ary ara-toekarena tsara indrindra amin'ny toerana misy vatohara dia manatsara ny tanjon'ny fizahantany maharitra. Na ny isan'ny mpizaha tany tsara indrindra na ny isan'ny mpizahatany izay maneho ny tokonam-baravarana rehefa mihena ny toe-javatra (ohatra, ny traikefa amin'ny fizahantany, ny toe-piainana ara-tontolo iainana) dia tsy isa manokana, fa isa maromaro izay miovaova arakaraka ny toe-javatra (oh, toerana, vanim-potoana, faharetan'ny loharano). Ny elanelana sy ny tokonam-baravarana azo ekena ho an'ireo toe-javatra ireo dia hiovaova arakaraka ny toerana misy azy ary hiova arakaraka ny vanim-potoana ny fahasalamana sy ny toetry ny vondrom-piarahamonina haran-dranomasina.
Fanamarihana momba ny terminology:
Lany andro sy tsy azo ampiharina ny foto-kevitry ny hoe "fahaizana mitondra". Mifanohitra amin'ny fitondran-tenan'ny fizahan-tany (izany hoe, tsy mitovy ny fihetsiky ny mpizahatany rehetra) sy ny faharetan'ny tontolo iainana manoloana ny fiantraikan'ny fizahantany, izay miovaova ihany koa ny fanaovana kajy ny fahafaha-mifototra amin'ny isan'ny mpizahatany ambony indrindra amin'ny toerana iray. Noho izany antony izany, vitsy dia vitsy ny ohatra momba ny fahaiza-mitondra mahomby amin'ny fampiharana. Na izany aza, hitanay fa ny teny hoe fahaiza-mitondra dia efa miorim-paka eo amin'ireo mpitantana an-dranomasina maro ary mbola ampiasaina rehefa miresaka momba ny fitantanana ny isan'ny mpizahatany any amin'ny haran-dranomasina. Noho izany, nampiasaina nandritra ny fifanakalozam-pifanakalozan'ny Resilient Reefs Initiative Solution momba ny fizahan-tany maharitra ny teny hoe fahaiza-mitantana mba hiresahana ny maha-zava-dehibe ny fanaraha-maso ny fiantraikan'ny tontolo iainana, ara-tsosialy ary ara-toekarena amin'ny fampiasana mpizaha tany amin'ny fanatsarana ny fitantanana.
Ny fiantraikan'ny fizahantany dia mety ahitana:
Ekolojika: Fahasimban'ny tontolo iainana ny loharanon-karena ara-batana (rano, tany, na rivotra) na fikorontanan'ny toetran'ny tontolo iainana toy ny bibidia, haran-dranomasina, zava-maniry amorontsiraka, ary dongona.
Ara-tsosialy: Fifandirana ara-tsosialy, fifandirana ary fahaverezan'ny soatoavina fototra sy kojakoja fototra
Toe-karena: Fampiasana tafahoatra ny fotodrafitrasa, fampihenana ny tombom-barotra sy ny fahafaha-mampiasa vola indray amin'ny fanatsarana mitohy, ary ny fiovan'ny tsenan'ny fizahan-tany avy amin'ny ecotourists mankany amin'ny mpizaha tany marobe izay manana fahatsapan-tena sy fiomanana ambany kokoa amin'ny fitantanana maharitra.
Ireto ambany ireto ny hevi-dehibe azo avy amin'ny Solution Exchange momba ny fizahan-tany maharitra sy ny fandraketana ireo famelabelarana nataon'ireo manampahaizana. Ny fehezan-teny asterisk (*) dia fanampim-panazavana voamariky ny manam-pahaizana fanampiny taorian'ny hetsika.
Amporisiho aloha ny mpandray anjara amin'ny sehatra rehetra ary matetika hiasa amin'ny fitantanana mahomby ny isan'ny mpizahatany. Ny fanatrarana ny tanjon'ny fizahantany maharitra dia mitaky fampifanarahana ny soatoavina avy amin'ny sehatra samihafa, izay tena sarotra. Ny fiaraha-miasa hatrany am-piandohana, fa tsy mitondra ny mpandray anjara amin'ny resaka any aoriana, dia tena ilaina amin'ny fividianana.
Modely fitantanana fizahan-tany miasa tsara indrindra miaraka amin'ny fanohanana hafa asa atao toy ny fanabeazana mba hisy fiantraikany amin'ny fitondran-tenan'ny mpizaha tany, famerenana amin'ny laoniny ireo faritra voakasika, fanatsarana ny fotodrafitrasa izay mampihena ny fifandraisan'ny mpitsidika amin'ny loharanon-karena, ary, raha ilaina, ny fampiharana.
Fantaro ireo toerana mafana mpizahatany ary ahena ny fiantraikany raha azo atao. Toeram-pizahan-tany maro no manana toerana mafana izay hamafisina ny fitsidihana sy ny fampiasana. Ny fanerena mahery vaika dia azo ahena amin'ny alalan'ny fomba maro (ohatra, fampihenana ny fifandraisana eo amin'ny mpizahatany sy ireo faritra saro-pady, ny fampivoarana sy ny fivarotana ireo toeram-pizahantany sorona ambany kokoa ary ny fanakatonana ny fidirana amin'ireo toerana manan-danja kokoa, na ny fampivelarana traikefa fanoloana any amin'ny toerana hafa).
Ampihena ny faneren'ny mpizahatany any amin'ny toerana manokana amin'ny alàlan'ny fandoavana vidiny araka ny tokony ho izy ny traikefa. Fomba iray hafa hampihenana ny faneren'ny mpizahatany dia amin'ny alàlan'ny vidin'ny dynamique – paikadin'ny vidin-javatra izay ametrahan'ny orinasa ny vidin-javatra miovaova mifototra amin'ny fitakian'ny tsena ankehitriny. Arakaraky ny vidin'ny zavatra iray no ankasitrahana kokoa, ary ny ampahan'ny mpizahatany manaja no mahaforona ny fifangaroana. * Mila mitadidy ny mpitantana fa ny vidiny avo lenta dia mety hiteraka tsy fitoviana ary tokony hampidirina ihany koa misokatra amin'ny varavarankely vaovaodifferential pricing (ohatra, ny vidiny eo an-toerana, ny vidin'ny tsy ambony indrindra, ny andro tsy misy sarany), noho izany dia tsy voavidy vidiny ireo olona tsy voakarakara ao anatin'ny vondrom-piarahamonina.
Amporisiho ny fifampiresahana eo amin'ireo mpamolavola/mpandrafitra eo an-toerana sy ireo mpitantana an-dranomasina mba hampitomboana ny faharetan'ny fizahantany. Ny fifandraisana lehibe kokoa eo amin'ny fahefana sy ny fahefana dia manampy amin'ny fananganana fahatakarana iombonana izay mampifandanja ny elanelana misy eo amin'ny tanjona samihafa.
Mamorona drafitra hetsika fiaraha-miasa fa tsy drafitra fitantanana ny fampiasana mpitsidika. Mety haharitra taona maro ny drafitry ny fitantanana ny fampiasana mpitsidika; mety hiafara amin'ny faharerahan'ny mpandray anjara izany ary ny sampan-draharaha dia afaka mahazo laza ho mpiasam-panjakana be loatra ary tsy mahay mamaha ny filàna eo noho eo sy/na ny toe-javatra miova. Ny fomba fanalefahana iray dia ny famolavolana drafitr'asa fiaraha-miasa. Ity drafitra 1 taona ity dia fifanarahana tsy mifamatotra izay havaozina isaky ny roa taona.
* Ampidiro ny rafitra fanaraha-maso sy fanaraha-maso mitambatra. Rehefa manambara ny fironana sy ny fifandraisana ny fanaraha-maso, ary rehefa zaraina eo amin'ny mpandray anjara izany, dia misy fototra iraisan'ny fahatakarana sy fifampitokisana, izay manome alalana ny fampidirana ny fitantanana mifanaraka amin'izany. Ny fitantanana adaptive dia fitambarana valinteny voaomana sy maneho ambaratonga samihafa amin'ny fitsabahana mba hitaratra ny haavon'ny fiantraikany na olana. Ny tondro tsirairay araha-maso dia omena valim-panontaniana mifanentana amin'ny fitantanana, ary misy vondron'ny mpiara-miombon'antoka miara-mifantina ny iray rehefa milaza fa ilaina ny fanaraha-maso. Raha miasa ny valin-teny dia azo averina ary esorina mihitsy aza.
Misongadina ao Ningaloo
Ahoana no ahafahantsika mitantana ny isan'ny mpizahatany mba hampihenana ny fiantraikan'ny tranokalantsika?
Sary © Joel Johnsson
Mamihina ny sisiny andrefan'i Aostralia, Ningaloo Reef dia iray amin'ireo haran-dranomasina lava indrindra eran-tany. Ny morontsirak'i Ningaloo dia voarakitra ao amin'ny lisitry ny Lova Iraisam-pirenena UNESCO tamin'ny taona 2011. Toerana malaza ho an'ireo mpandeha an-trano sy iraisam-pirenena mitsidika an'i Western Australia (WA), miaraka amin'ny indostrian'ny fizahan-tany miroborobo miorina amin'ny haran-dranomasina sy ny morontsiraka, izay manampy eo amin'ny 110 tapitrisa dolara eo ho eo. ny toekarena eo an-toerana isan-taona. Ny fizahan-tany ao Ningaloo dia vanim-potoana, ny faritra dia mitombo avy amin'ny mponina maharitra 3,000 eo ho eo mba hampiantrano mpitsidika 20,000 amin'ny fotoana iray mandritra ny volana ririnina. Io firotsahana io dia manindry ny rafitra ara-tontolo iainana, ara-tsosialy ary ara-toekarena. Ny mpiara-miombon'antoka ao Ningaloo dia tena liana tamin'ny fianarana momba ny rafi-pitantanana mety ho an'ny fanombanana fampandehanana mba hahafahan'izy ireo mamaly araka ny tokony ho izy ny isan'ny mpizahatany sy ny fiantraikany.
Ny areti-mifindra COVID-19 dia nisy fiantraikany tamin'i Ningaloo tamin'ny fomba tsy nampoizina. Nitombo ny fizahan-tany Ningaloo nandritra ny areti-mifindra ary niova ny demografikan'ny mpizaha tany. Nakaton'ny fanjakana WA ny sisin-taniny mba tsy hisy mpizahatany iraisam-pirenena na Aostraliana avy amin'ny fanjakana hafa afaka miditra. Ny areti-mifindra ihany koa dia nanasarotra ny nandao ny fanjakana ary niverina ny mponina WA. Tamin'ny fanaovana izany, WA dia nisoroka ny fiantraikany ratsy indrindra amin'ny COVID-19, izay misy tranga vitsivitsy nitranga tao amin'ny fanjakana. Vokatr'izany dia vitsy kokoa ny mpizaha tany ivelan'ny fanjakana sy ny mponina ao WA izay matetika mandeha any ampitan-dranomasina na any amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena miala sasatra ao an-toerana. Na dia eo aza ny fihazonana ny haavon'ny fitsidihana efa ambony, dia niova ny demografika ny mpitsidika an'i Ningaloo, ka nitombo ny tahan'ny fanjonoana fialamboly sy ny fampihenana ny fampiasana fitsangatsanganana eo an-toerana.
Iray amin'ireo zavatra henonay tsy tapaka ny hoe ny mponina sy ny mpampiasa ao Ningaloo dia tena miahiahy momba ny isan'ny olona mitsidika sy ny fiantraikan'ireo olona ireo amin'ny soatoavina – tsy ny soatoavina ara-tontolo iainana ihany fa ny soatoavina ara-tsosialy sy ara-kolontsaina eto Ningaloo ihany koa. – Joel Johnsson, Chief Resilience Officer, Ningaloo
Jereo ny famelabelarana nataon'ireo manampahaizana Solution Exchange amin'ny teny anglisy na frantsay raha te hahalala bebe kokoa:
Ny fahafahan'ny mpitsidika mifototra amin'ny fiantraikany ara-tsosialy - Doug Whittaker, Fikarohana momba ny Confluence sy Consulting
Ny fampiasana sy ny fanaraha-maso ny fiantraikan'ny mpitsidika amoron-tsiraka - Abby Sisneros-Kid, Utah State University
Vahaolana maharitra amin'ny fanamby amin'izao fotoana izao amin'ny fitantanana ny fampiasana fialam-boly ho an'ny olombelona amin'ny tontolo iainana haran-dranomasina - Mark Orams, Anjerimanontolon'ny Teknolojia Auckland
Fahaizana mitondra - Sally Harman, Manampahefana amin'ny valan-javaboary an-dranomasina Great Barrier Reef
Evaluation de la capacité de charge base sur l'impact social – Doug Whittaker, Confluence Research and Consulting
Ny fampiasana sy ny fiantraikan'ny mpitsidika amin'ny litoral - Abby Sisneros-Kid, Utah State University
Échange de solutions - Capacité de charge - Sally Harman, Manampahefana amin'ny valan-javaboary an-dranomasina Great Barrier Reef
Fampandrosoana ny paikadin'ny fizahantany maharitra
Ny Vahaolana Vahaolana dia natao hanentana ny fisainana, hampivondronana ireo mpitantana sy mpiara-miombon'antoka amin'ny fifanakalozam-pahalalana sy ny fianarana, ary hanampy amin'ny hetsika eny an-kianja. Ho amin'izany tanjona izany, dia izao ny mety ho dingana manaraka nofaritana nandritra ny dinika momba ny laharan'ny fizahantany sy ny fitantanana azy ireo:
Ampirisiho ireo manam-pahaizana amin'ny famolavolana fandalinana izay mampiditra ny fanombanana ara-tsosialy, ara-tontolo iainana, ara-pitantanana ary ara-toekarena momba ny isan'ny mpizahatany sy ny fitondran-tena, ary ny fiantraikany mifandraika amin'izany amin'ny toerana.
Amin'izao fotoana izao dia tsy misy ohatra "standard volamena" momba ny modely mitambatra hitantana ny isan'ny mpizahatany ao amin'ny habaka haran-dranomasina. Mba hahavitan'ny tranokalan'ny RRI amin'ny fomba mahomby io fomba fiasa manontolo io, dia mila mamolavola zava-baovao izy ireo, miaraka amin'ny fanohanan'ny manam-pahaizana momba ny sosialy, ny tontolo iainana ary ny toekarena. Jereo ity habaka ity raha nanomboka nandrakotra fanadihadiana iray teo an-toerana ny mpitantana ny RRI ao Ningaloo.
Mandehana any amin'ny pejy manaraka: Fitantanana ny fitondran-tenan'ny mpizaha tany
Ity atiny ity dia novolavolaina tamin'ny fiaraha-miasa
miaraka amin'ny Great Barrier Reef Foundation.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitantanana ny fampiasan'ny mpitsidika: Torolàlana amin'ny fanomezana fialamboly an-kalamanjana maharitramanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBoky Torolàlana Fanaraha-maso: Fanombanana ny fahombiazan'ny fitantanana ny fampiasana mpitsidikamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPaikady hetsika fitantanana ny fizahantany GBRMPA
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoModely fitantanana fanatsarana ny fizahantany
Webinar amin'ny Reef Support, fitaovana natao hanampiana ny mpitantana ny MPA hanangona sy hivarotra ny saram-boninkazo an-dranomasina
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoInona no tsy mety amin'ny foto-kevitry ny mitondra Capacity? Ao amin'ny fanamby amin'ny fikarohana fizahan-tany
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamantarana ny fampandrosoana maharitra ho an'ny toeram-pizahan-tany Boky torolalana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitantanana ny mpitsidika, amin'ny fitantanana sy fitantanana ny faritra arovana